Sikandar Raza Age, Biography, career, stats, networth, Ranking & News
Sikandar Raza - Page 2
[player_ls pid="183" id="ply-sw"]
The ongoing pay dispute continues to torment Zimbabwe cricket, as the African nation is set to field a severely weakened team in the triangular T20I series against Pakistan and Australia. Zimbabwe Cricket had already announced the 22-man list and had excluded five of its
ICC World Cup Qualifiers 2018: Super Sixes Match 3: Zimbabwe vs Ireland, Match Review
After a riveting first round of ICC World Cup Qualifiers, the action moved towards the Super Six stages. The third match of the contest saw Zimbabwe and Ireland clash at Harare Sports Club. Ireland won the toss and elected to bowl first. Zimbabwe
March 16, 2018 April 23, 2019
Watch: Sikandar Raza smashes the ball out of the ground, breaks windscreen of a car outside
The third match of the ICC World Qualifiers between Nepal and host Zimbabwe belonged to one man named Sikandar Raza. Not only did his mammoth 123 off 66 balls knock the winds out of the Nepalese, but he also came back and
Zimbabwe finally managed to beat Afghanistan in the limited-overs series in UAE after losing the couple of T20I’s and the opening ODI, and it buoys it came in style. It was a magnificent all-round display by Zimbabwe to level the five-match series
Left-arm fast bowler Brian Vitori has been included in the 14-man Zimbabwe for the limited-over series against Afghanistan. Zimbabwe will play two T20I and five ODI series against Afghanistan, starting on February 5. Vitori made his comeback to the national team on the
Bangladesh Tigers began their Tri-series campaign against Zimbabwe on a winning note riding on an impressive bowling performance by Bangladesh. It was a dominating performance by the Asian team as they romped home by 8 wickets after restricting Zimbabwe to a below-par